Koowheel 2nd chizvarwa e-skateboard akatasva wokutanga - Jomo Technology Co., Ltd
Koowheel 2nd chizvarwa e-skateboard rokutanga pakufamba
Hi ~ Nokuda Koowheel 2 nd it chizvarwa yemagetsi skateboard Kooboard ndiye wokutanga yemagetsi skateboard muupenyu hwangu, uye ini kashoma kushandisa mari kutenga imwe chitoyi chinodhura yakadaro (Kuwedzera, akatenga kutevera bhasikoro ne "chikonzero chakanaka" ...) saka ndakanga vachida kuenda kupaki. Uye ndakanga kurwadza chaizvo kuti apedza mileage siyana bvunzo, gare gare ini tsanangura Sei kunoshungurudza.
Usati verenga nyaya, tanga kuudza skateboard kuti mashoko nokuda bhuku.
The zvachose mutoro koowheel yemagetsi skateboard ndiye 61.9KG nomuviri uremu 58.5KG + muviri hunodzivirira mudziyo 1.6KG + Ultra-lightweight kumhanya shangu 0.2KG + 960ml Water + 1KG runharembozha makiyi nemarara 0.6KG.
Nezuro kunze chaizvo inopisa, aida kutora skateboard kuna Riverside Park, asi nokuti mhuri kudya nguva yakanyanya pedyo, vaifanira kuenda pedyo embankment kuzviita. Mumadekwana, Park ane zvakawanda vanhu, saka kumhanyisa uye deceleration vari kakawanda chaizvo, panguva inenge 5:30 pm, ndakanga akayeuka nemhuri yangu, nguva ino atora maminitsi 55.
Mushure kudya kwemanheru, haana tariro kuenda zvakare.
Uye pashure aiva mabiko nemhuri yangu uye kudzokera Riverside Park pa 9 o'clock, panguva ino chitiviri chete nguva dziri kure vamhanyi, saka muchipata akisarareta kwechinguva, More leisurely nzira kunakidzwa, nguva ino kuchovha maawa maviri nehafu .
Manheru, akaverevedza 10.68KM.
Dzepfumbamwe manheru, vapedzisire 28.76KM zvakare.
Materu inoshanduka zvishoma apo avhareji kukwira ndiyo 26 mamita.
The pamusoro date chakanyorwa neDare APP "Geo Tracker", kuti Satellite Positioning kune chaiyo nzira. The bhasikoro mukoto anenge 2.3 km pamwe zvinenge Asphalt zvose pakarongwa namabwe, mamita chete 50 rakanyatsojeka nematambudziko pamwe usina kukonekita (mbiri nzvimbo inosvika 50 mamita). Ndingadai akanga maawa anenge 3 uye maminitsi 14 (zvinenge zvose vakamira Skateboarding ~ _ ~ "), chaizvoizvo zviri zvikuru zvinorwadza.
Nguva ino I ridded 39,44? Km zvizere mhosva bhatiri ~ Hauna kuona zvakaipa, rimwe bhatiri, nguva dzakawanda ndaida kupa kuti kuenda kumba uye kuedza zvakare rimwe zuva, izvi chaizvoizvo zvikuru zvemamiriro upenyu ... ... ... ... (uye kana ukamhanya kunze bhatiri, ruoko akabata bhatiri akava chando, injini chete micro-tembiricha, Good here ~), ndinofunga kana handina kurega uye aende, mileage inofanira yepamusoro, kana munhu aine bhodhi iri, unogona kuedza. Zvinofanira yakareba kupfuura kumira I pamusoro skateboard .
Munguva yose kubudiswa, ndakava zhinji kuchinja nokukurumidza uye akaputsa (rangu kumhanyisa uye deceleration uye nokukurumidza zvenguva ndapota kureva pamufananidzo apa), saka kufunga I kuti kuva 20KM mileage siyana Pamuganhu (maererano ruzivo, vagadziri kazhinji With hamba kumhanya pamwe kugara kukwira kuyera mumwe Data yakanaka, saka handigoni kudavira). Asi nekuda pfungwa iyi saka ndakanga vamwe tsika (ndakanga kufunga kuti achangoerekana simba kure, kunge vakabata 7.8 makirogiramu yemagetsi skateboard kumusha).
Uye nekuda pfungwa iyi zvakaipa, saka ini ridded kusvikira 12 o'clock, magetsi chaizvo vapera panze. (Ndiani anoziva Data achanyorwa saka kuchinja ...... .. I chaizvoizvo vakarasikirwa), Zviri 20km dzichimhanya kupfuura ini Zvinofungidzirwa nokukurumidza 20km. (nyaya iyi inotiudza, kuyeuka zvinoreva simba vanoratidza mwenje pamberi kuridza yemagetsi skateboard, uye usafungidzira kuti mugadziri ose anofanira kuva runonyengera ").
pamakumbo mana aiva pasi pamusoro skateboard (mutambo sezvo kart kana nepfambi taneta, zviri zvechokwadi kwazvo)
Nenguva dzepfumbamwe sipidhi inodiwa vanenge 26.8KM.
Muchidimbu, pashure muedzo uyu, zvinotevera zvinogona yasimbiswa:
The mileage pamusoro yemagetsi skateboard yakanaka chaizvo, vagadziri anopa mashoko chakanyanya kuchinja.
Motor uye matochi unhu hwakanaka, mvere pakufamba anenge asina superheat.
The vhiri achava ungazoshamisa rutsoka pamusoro zvidhina mugwagwa.
Kana paine 12mm mavhu pasi vhiri, mavhiri achaita kusvetuka.
Kana paine 5mm mavhu, asingadi kukanganisa kudzorwa.
Mabhureki inopinza uye anenge, ndapota regai vanosundira zvakaoma, uye kuita nyaya haachatauri kare.
Kumhanyisa waivako Zvakanakawo, zvinofanira kuva zvinofadza pashure anokiyinura.
It ane anochinjika zvakanaka ine mugwagwa, mukana wokushandiswa weboard chete kuti mavhiri Zviine.
The pamusoro mileage uye nokukurumidza bvunzo anoteererwa pasina anokiyinura, uye ndichaita kiinura kuona kumhanya chaiye bhodhi inotevera nguva.
Post nguva: Sep-29-2017